Books – စာအုပ်မြို့တော်
#ရှာရွတ်ခန်း *သာမာန်ဆင်းရဲသားမိသားစုကကလေးတစ်ဦး အဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်။စာမတော်ဘူး ဥာဏ်မ ကောင်းဘူး။ဒါပေမယ့် ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဖခင်ရဲ့သားအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့် ကျောင်းကိုမနက်တိုင်းဖခင်မောင်းတဲ့ကုန်ကား နဲ့သွားတက်ရင်းအထက်တန်းအောင်ခဲ့တယ်။ဘ ဝတလျှောက်လုံးဖခင်ရဲ့စကားတွေနဲ့မိခင်ရဲ့ဘာ သာရေးဆိုတာလူသားတွေ အတွက်တံဆိပ်မ ဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးမမူတွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမာစ တာဘွဲ့ရတဲ့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အရမ်းဖြစ်ချင်ပေမယ့်မိသားစု အခြေအနေကြောင့်အချိန်အကြာကြီးအိမ်မက် တွေကိုမေ့ထားခဲ့ရာက ပညာတတ်ထက်ရုပ်ရှင်သ ရုပ်ဆောင်ဘဝကိုရူးသွပ်လွန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်အ ရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးရုပ်ရှင်လောကထဲကို အောက်ဆုံးကနေစဝင်ခဲ့တယ်။နှစ်ရှည်လများအ နှိမ်ခံရပြီးမှBollywoodရဲ့မင်းသားတဦးဖြစ်လာ ခဲ့တယ်။တန်းလျား အစုတ်လေးမှာနေခဲ့တဲ့လူငယ် တယောက်က ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးမင်းသားတဦး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။Bollywoodရဲ့No.1မင်းသား ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်အောင်မြင်သူအများစုလို မာန အတ္တ ငွေကြေးချမ်းသာမူရဲ့သာယာမူတွေ နောက်ကိုမလိုက်ပဲ ရသမျှပိုက်ဆံအများစုကိုပရ ဟိတအတွက်သုံးခဲ့တယ်။သူကအစ္စလာမ် ။ဒါပေ မယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် ဟိန္ဒူဘာသာတိုင်းကို လှူခဲ့တယ်။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကင်ဆာဖောင်ဒေး ရှင်းတွေ အခမဲ့ဆေးရုံတွေ ကျောင်းတွေဆောက် ပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းရဲ့ပ ရဟိတအလုပ်ဆုံး မင်းသား Bollywoodရဲ့No.1မင်းသား ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးမင်းသားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ” ကျတော်လောဘမကြီးချင်ဘူး ကျတော်နာမည်လဲမကြီးချင်ဘူး ကျတော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို အသက်နဲ့ရင်းပြီးကြိုးစားနေရရင် တော်ပြီ။ […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 12/08/2018
လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကင်းကွာပြီး နေလို့မရလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ အပြုအမူ အကျင့်စရိုက်တွေဟာလည်း သူ့အပေါ် ရိုက်ခတ်ကူးစက်လာတတ်ပါတယ်။ လွှမ်းမိုးလာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မွေးဖွားချိန်ကစပြီး အရွယ်ရောက်ချိန်ထိ အနီးကပ်နေခဲ့တဲ့ မိဘရဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူတွေကို အတုခိုးတတ်ကြတယ်။ မိဘတွေ လုပ်တာကို လိုက်လုပ်တတ်ကြတယ်။ အတုယူကြတယ်။ အတုယူ လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ အကျင့်ဖြစ်သွားကြတယ်။ ညတိုင်း မအိပ်ခင် စာအုပ်ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ ဖခင်ကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ကလေးဟာ ငယ်စဉ်ကတဲက ကာတွန်း၊ ပုံပြင်စာအုပ်လေးတွေဖတ်တဲ့ အကျင့်ရလာတယ်။ သူ ကြီးလာတဲ့အခါ စာဖတ်ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ များပါတယ်။ ထို့နည်းတူ နေ့စဉ် အရက်သောက် အမြဲမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သားဟာလည်း ကြီးလာတဲ့အခါ အရက်သမားဖြစ်လာမှာ မဆန်းပါဘူး။ အားရင် အိပ်ယာပေါ်လှဲ ကျောခင်းနေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ သမီးဟာလည်း […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 09/08/2018
ကျွန်တော့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဖြစ်အပျက် အတော်များများကို မှုန်ဝါးဝါးလေးပဲ မှတ်မိပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့အကြောင်းတွေကျတော့ ခေါင်းထဲက ဖျောက်မရဘဲ အခုထိ အမှတ်ရနေဆဲပါ။ အဲဒါတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အမေဟာ ကျွန်တော်ကို ငယ်စဉ်ကတဲက အခက်အခဲ၊ စိမ်ခေါ်မှုတွေကို မကြောက်တတ်အောင်၊ ရင်ဆိုင်ရဲအောင် မညှာမတာ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ အမေဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် ရက်စက်လွန်းတယ်၊ ကျွန်တော့်ကို မချစ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြီးလာတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲကို မကြောက်တတ်တော့ဘူး၊ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးတတ်လာတယ်၊ စွန့်စားရဲလာတယ်။ ဒါတွေဟာ ငယ်စဉ်က အမေ့ရဲ့ လေ့ကျင့်ပေးမှုတွေကြောင့်ပါလားဆိုတာကို နောက်မှ နားလည်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ၄ နှစ်သားအရွယ်ပဲ ရှိအုံမှာပါ။ အမေက ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ပြီး တနေရာကို ကားမောင်းသွားတယ်။ လမ်းမှာ အမေက ကားကို ရုတ်တရက် […]
Posted in: Books, FeaturedLeaveacommentMM Book City	 09/08/2018
“ဂျွန်ပေါလ်ဒေဂျိုးရီးယား (သို့မဟုတ်) ပြဿနာကို အခွင့်အလမ်း အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သူ”
ဂျွန်ဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ် (သူ့ အသက် ၂၇ နှစ်)မှာ ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ Redken ကုမ္ပဏီမှာ အရောင်းသမား အလုပ်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က Redken ကုမ္ပဏီဆိုတာ ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးပါ။ သူဟာ လစာဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ကားအသုံးစရိတ် ၁၂၅ ဒေါ်လာပဲရတယ်။ တနှစ်ခွဲအကြာမှာ အရောင်းဋ္ဌါနကြီး ၂ ခုရဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာတယ်။ သူ့လက်အောက်မှာ အတွင်းရေးမှူးအမျိုးသမီး ၂ ယောက်နဲ့ ဝန်ထမ်း ၄ ယောက်ရှိတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ သူအလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတာက သူအလုပ်မှာမကြိုးစားလို့၊ သူ့ဋ္ဌါနတွေမှာ အမြတ်နဲလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ဝန်ထမ်းနဲနဲလေးနဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက် ဝင်ငွေအများကြီး ရအောင် ရှာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 05/08/2018
“အာခီမီးဒီးစ် (Archimedes) “
အမည်ရင်းအာခီမီးဒီးစ် မွေးသက္ကရာဇ်ဘီစီ ၂၈၇ ခန့် ဆိုင်ရာကျူးစ်၊ aစ္စလီ၊ ဂရိ ကွယ်လွန်ဘီစီ ၂၁၂ ခန့် နိုင်ငံသားဂရိလူမျိုးဂရိပညာရေးသင်္ချာ ရူပဗေဒ နက္ခတ္တဗေဒအင်ဂျင်နီယာ တီထွင်ပညာရှင်အလုပ်အကိုင်သိပ္ပံပညာရှင် အာခီမီးဒီးစ် (အင်္ဂလိပ်: Archimedes/ˌɑːkɪˈmiːdiːz/; ဂရိ: Ἀρχιμήδης) (ဘီစီ ) သည်ဂရိလူမျိုး သင်္ချာ ပညာရှင်၊ ရူပဗေဒ ပညာရှင်၊အင်ဂျင်နီယာ၊ တီထွင်ပညာရှင် နှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကြီး ဖြစ်သည်။သူသည် Hydrostaticsနှင့် Statics စသော ရူပဗေဒ ပညာရပ်များကို အုတ်မြစ်ချ ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကုတ်နိယာမ သဘောတရား ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။Seige engine နှင့် Screw pump တို့ကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်သည့် စက်ပစ္စည်းများကို တီထွင်ခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့်လည်း သူ့အား အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 01/08/2018
“ဇူကာဘတ် ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ “
မက်ဇူကာဘတ် ဟာ ဖေ့စ်ဘုတ် ကို တီထွင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ အထဲက တချို့အရာတွေကိုလည်း သိပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာ ဇူကာဘတ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတွေ လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ . သူရဲ့ နာမည် အပြည့်အစုံ က Mark Elliot Zuckerberg ပါ။ May 14, 1984, White Plains မြို့၊ New York ပြည်နယ် မှာ ပညာတတ် မိသားစုကနေ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ . သင်္ဘောသားဖြစ်တဲ့ အဖိုး က ဘူဂေးရီးယားလူမျိုးပါ။ သူ့မှာ ဘူဂေးရီးယန်း သွေး တစ်ဝက်ပါတယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ […]
“Steve Jobsရဲ့ နာမည်ကျော်မိန့်ခွန်း”
“တစ်ခါတစ်လေမှာ လောကကြီးက သင့်ကိုအုတ်ခဲနဲ့ ပေါက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေတော့ မပျောက်သွား ပါစေနဲ့။ သင်တစ်ခုခုကိုတော့ ယုံနေမှဖြစ် မယ်။ သင့်ကိုယ်သင်၊ သင့်ယုံကြည် ချက်၊ သင့်ဘဝ၊ သင့်ကံကြမ္မာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်မှာ ယုံကြည်ချက် တစ်ခုတော့ ရှိနေဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော့် တစ်ဘဝလုံး ကျွန်တော့်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်စေခဲ့တဲ့ အရာကတော့ ကျွန်တော် ချစ်မြတ်နိုးတာကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တာကို သင်ရှာဖွေဖို့ လိုပါတယ်။ သင်နေရမယ့် အချိန်က အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ အခြားလူ တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝထဲမှာ ဟန်ဆောင်ပြီး မနေပါနဲ့။ အခြားသူတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင် တွေထဲမှာ ပိတ်မိမနေပါစေနဲ့။ အခြားသူတွေရဲ့ အမြင်တွေကြောင့် သင့်စိတ်ဓာတ် မညှိုးနွမ်းပါစေနဲ့။ အရေးအကြီး ဆုံးကတော့ သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာကို ရယူဖို့ သတ္တိရှိပါစေ။ အခြားအရာတွေ အားလုံးက […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 29/07/2018
`မေမြို့ခေါ် ပြင်ဦးလွင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ´
မေမြို့ရဲ့အတိတ်တွေဆီ ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်ရအောင် ————————————————————- မေမြို့၊ပြင်ဦးလွင်၊ ပန်းမြို့တော်၊ တောင်လှေကားမြို့ဟူသောအမည်နာမများစွာ ပိုင်ဆိုင်သည့်မြို့ကလေးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများရောက်ဖူး ကြသလို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှစ်သက်သောမြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ပြင်ဦးလွင်ကလူစိတ်ဝင်စား ရသည်ကို ညွှန်းရမည်ဆိုလျှင်ပြင်ဦးလွင် ပိုင်ဆိုင်သောဂုဏ်ပုဒ်များစွာရှိနေပါသည်။ မေမြို့ပန်းနှင့်ဂန္ဓမာထွက်သောမြို့၊ ဆွယ်တာမြို့၊စံဂျူးမလိုင်မြို့၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မြို့၊ကော်ဖီနှင့်ယိုမျိုးစုံထွက်သောမြို့၊ ဗိုလ်လောင်းမြို့၊ ရထားလုံးရှိသောမြို့၊ အလှဆုံးပန်းခြံရှိသောမြို့၊ဘော်ဒါကျောင်း၊ နွေရာသီတွင်လူတိုင်းတောင့်တ သောတောင်စခန်းမြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Hollywood မြို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပြင်ဦးလွင်မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာပါသနည်း။ 1850 ခုနှစ်တွင်မြန်မာနန်းတွင်းအရာရှိတို့ သည် ပြင်စာရွာနှင့်ပြင်ကြီးကျေးရွာ အကြား ရှမ်းရွာလေးတစ်ရွာကိုရောက်ရှိခဲ့စဉ် ထိုရွာကိုပြင်ဦးဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ကုန်းမြင့်လွင်ပြင်ထက်တွင်တည်ရှိသောကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ဟု မှည့်လိုက်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက် ပြီးနောက် 1887 ခုနှစ် တွင်အမှတ် (5) ဘင်္ဂလားခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးကြီး H.O May သည်ပြင်ဦးလွင်ရွာတွင် စစ်အခြေစိုက်တပ် ထိုင်ရသည်။ ပြင်ဦးလွင်၏ ရေမြေတောတောင်သဘာဝ၊ ပင်လယ်ရေအမြင့်၊ ရာသီဥတုတို့သည် […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 26/07/2018